အသက် ၂၅ နှစ် - NEET မှ alpha သို့ပြန်လည်ပြန်အမ်းခြင်းသို့ပြန်လည်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း - Brain On Porn
(၂၅) နှစ် - NEET မှ alpha သို့ပြန်လည်သက်ဆိုင်ခြင်းသို့ပြန်လည်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းအထိ
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ခန့်ကကျွန်ုပ်သည် NoFap ကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါအရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျများနှင့်ထွက်လမ်းများအတွက်အပူတပြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကပိန်လွန်းနေတယ်၊ ​​အမှိုက်ပုံးတွေအများကြီးစားတယ်၊ ညစ်ညမ်းနေတယ်၊ ​​ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားတယ်။ အဲ့ဒါပဲ ငါအရမ်းနောက်ကျပြီးမှအိပ်ပြီးအမြဲအိပ်ပျော်ခဲ့တယ်။ ၂၃ နှစ်အရွယ်၊ အလုပ်မရှိ၊ ကားမရှိဘဲအိမ်မှာနေတယ်။
ငါစင်ကြယ်သောနဲ့ရိုးရိုးတစ် NEET ခဲ့သည်။
NoFap ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်, ငါ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှပြောင်းလဲသွားတယ် သိသိသာသာ တစ်လကျော်အနည်းငယ်၏ span အတွင်း။ ကျွန်မကိုယ်အလေးချိန်ကျသွားတယ်၊ အားကစားရုံတစ်ခုမှာတက်ခဲ့တယ်၊ စာအများကြီးဖတ်တယ်၊ ကျန်းမာလာတယ်။ အမှုအရာကောင်းသောခဲ့ကြသည် ... ဖြစ်ကောင်းကအစဉ်အဆက်ကြောင်းအချက်အထိဖြစ်ခဲ့ဖြစ်နိုင်ဆုံးသက်သက်သာကောင်းသော။ အခြေအနေတွေကမလွယ်ကူခဲ့ဘူး။ အိမ်စာနေသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ NEET လူနေမှုပုံစံသည်အသက် ၁၄ နှစ်မှ ၂၃ နှစ်အထိဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် ၉ နှစ်တာကာလဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ယခုငါလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာ၏မြှင့်တင်အပေါ်စတင်ခဲ့တယ်။ ငါအဖြေရှိခဲ့တယ် လအနည်းငယ်အတွင်းကုန်စုံဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်အလုပ်တစ်ခုရခဲ့သည်။ ဘာမှမကြီးမားပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာ ၀ င်ငွေရင်းမြစ်တစ်ခုနဲ့ငါ့ကိုအလုပ်များနေအောင်လုပ်နိုင်တာဟာစိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုပါ။
စိတ်ဝင်စားစရာကကျွန်ုပ်သည်တစ်သက်တာလူကန်လန် (shocker) အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၌အသစ်သောယုံကြည်မှုနှင့်လူမှု့ဆက်သွယ်မှုရှိခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါအပျိုစင်မဟုတ်ပေမယ့်ရုံအနိုင်နိုင်မဟုတ်ပါဘူး။ သုံးကြိမ်တိုင်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသည်။ အဲ့ဒီမှာကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးကျွန်မအာရုံစိုက်မိခဲ့တယ်။ သူမသည်ကွဲပြားခြားနားခဲ့သည်။ လုံးဝအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ငါသူမကိုစဉ်းစားကိုရပ်တန့်နိုင်ဘူး။ ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှုအနည်းငယ်ကိုမျှဝေလိုက်သည်။ ငါ့အရူးအမူးကြီးထွားလာတယ်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်လုပ်နေတာနဲ့ပြောဆိုခဲ့တာကိုတွေ့ရပြီးသင့်အတွက်ရိုးသားမယ်၊ ငါက ငါ့ကိုယ်ပိုင်မျှော်လင့်ချက်များ shattering.
ရှည်လျားသောဇာတ်လမ်းတို၊ လအနည်းငယ်အကြာတွင်သူသည်ကျွန်ုပ်၏ချစ်သူဖြစ်သည်။ ငါတို့မှာအကောင်းဆုံး၊ ကောင်းကောင်းရင်းနှီးတဲ့ဘ ၀ ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ် (တကယ်တော့ငါအဲဒီမှာရှိတဲ့တစ်ယောက်တည်းပဲ) ။ ပုံပန်းသဏ္toာန်မရရန်၊ သို့သော်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည် အကြိမ်အနည်းငယ်တစ်ပါတ်။ ဒါကငါ့အတွက်အတော်လေး shell ကို - ထိတ်လန့်ရှိ၏ 4chan-NEET beta မှနေ၍ နေ့တိုင်းနီးပါးအလွယ်တကူသယ်ဆောင်သွားနိုင်ခြင်းကျွန်တော်သိဖူးသမျှထဲမှာအလှပဆုံးမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အတော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်။ သို့တိုင်, တကယ်ပါပဲ။ ဒါကြောင့်လအနည်းငယ်အကြာသူမရဲ့ကျောင်းဝန်ကတက်လာပြီးငါအလုပ်မှာအချိန်ပြည့်အနေအထားကိုရောက်နေတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ချိတ်ဆက်မှုများသည်မကြာခဏဖြစ်လာသည်။ Cue Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှု။ 😛နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ထက်နည်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံနေရသည်။
ကျွန်တော်ယူလို့မရပါဘူး ဒါဆိုဘာဖြစ်တာလဲ ငါနောက်တဖန် fapping စတင်ပါ။ အဘယ်သူမျှမ porn, အတွေးများ ... ထို့နောက်ငါသိနောက်ထပ်လာမည့်အရာ, porn ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ စွဲလမ်းနှင့်ပတ်သက်။ ရယ်စရာအရာ ... သူတို့ကသူတို့အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်သူတို့တတ်နိုင်သမျှမဆိုလမ်းအတွက်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်? ဒီတော့ဒီမှာငါ၊ ငါရည်းစားထားမှလွဲရင်ငါ NoFap မတိုင်ခင်စတုရန်းတစ်နေရာမှာရှိနေတယ်။ ဘာထင်လဲ မကြာခင်မှာပဲသူမဟာသတိထားမိလာပြီးအာရုံစူးစိုက်မှု၊ ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့မှုနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပြောပြသည်။ သန့်ရှင်းသောဘုရား shit သူမမှန်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ချစ်ပ်များအားလုံးကိုရည်းစားခြင်းတောင်းထဲထည့်ပြီး NoFap ကိုလုံးဝစွန့်လွှတ်ခဲ့ရသည်။
ဒါကြောင့်ငါတို့နှစ်ယောက်ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလကိုမြန်မြန်ရှေ့ဆက်ပါ။ ငါတို့လမ်းခွဲလိုက်တယ် ငါလုံးဝကွဲသွားတယ်၊ အဲဒါနိမ့်ကျတဲ့အချက်ပဲ။ ငါအောက်ပိုင်းကိုသွားနိုင်ဘူးတူသောငါရိုးရိုးသားသားခံစားရတယ်။ ဒီတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ငါဟာတစ်ခုတည်းသောရွေ့လျားမှုဟာ NoFap လှည်းပေါ်ပြန်ခုန်ဆင်းဖို့ပဲ။ ဒီတစ်ခါတော့ငါ့သေနတ်တွေကိုကပ်ပြီးငါသေရင်ငါစတုရန်းတစ်နေရာမှာပြန်လာမယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။
ဒီတော့ဒီမှာငါ ၉၈ ရက်အကြာမှာလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကသင်ခန်းစာတွေအများကြီးသင်ယူပြီးတဲ့နောက်ငါဟာကွဲပြားခြားနားတဲ့လူတစ်ယောက်လိုခံစားရတယ်။ မင်းရဲ့ဘဝမှာကျောက်တုံးတွေကိုကျော်ပြီးလှည့်ပတ်ကြည့်ပါ ဦး ။
NoFap မှာအဖြေအားလုံး - ကောင်းကင်၊ မရှိဘူးလို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းကမင်းကိုပိုကောင်းတဲ့ဘ ၀ ထဲကိုရောက်အောင်သင်စိုက်နိုင်တဲ့မျိုးစေ့ဖြစ်နိုင်တယ်။ သို့မဟုတ် ပို၍ သင့်လျော်သောနှိုင်းယှဉ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် - ၎င်းသည်တံခါးသော့တစ်ခုနှင့်တူသည်။ အပြောင်းအလဲကိုဖြစ်ပေါ်စေသောသော့သည်သူ့ဟာသူမဟုတ်ပါ မင်းသော့ကိုရှာရမယ်။ ထိုအခါသော့ယူပါ။ သူတို့ကတံခါးသို့သွင်းထားလေ၏။ တံခါးသော့ကိုဖွင့်ပြီးတံခါးကိုကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပါ။ သင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားရပ်တန့်သွားနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်၏အကျင့်ဟောင်းများနှင့်သင်၏အသားကိုရိုက်နှက်ခြင်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါကဘာမှပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်သင်၏ dopamine သည်စတင်ဝင်ရောက်လာပြီးသင်မွေးဖွားလာသည့် drive ကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် streaming porn ကိုမတွေ့မီသင်၌ရှိသည်။ လိမ့်မည် မတ်တပ်ရပ်, ထိုပြောင်းလဲမှုများလုပ်နီးပါးအလိုအလျှောက်ပေါ်ပါ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမစ်ရှင်တစ်ခုလိုပါပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာရှာနေတာပါ။ ကျွန်ုပ်သည်သက်သတ်လွတ်သွားသည်၊ နေ့တိုင်းတွေးတောဆင်ခြင်သည်၊ မိမိကိုယ်ကိုချစ်သောကတိသစ္စာပြုမှုများ၊ တစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်အားကစားရုံသို့သွားသည်၊ ကျောင်းသို့ပြန်လာပြီးနေ့တိုင်းဖတ်သည်။ ငရဲ၊ ငါ့ဂိမ်းစက်တွေတောင်မှငါ့ရဲ့ browser ကနေအာရုံပျံ့လွင့်စေတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်အားလုံးကိုပိတ်ပင်လိုက်တယ်။
ငါပွုနိုငျသညျ, ဒါကြောင့်သင်သည်တတ်နိုင်လျှင်။ ဒီတော့ dammit, ထိုသို့ပြုကြ၏။ 🙂
LINK - 98 နေ့ရက်များ: Self-ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အကြှနျုပျ၏ roller coaster စီးနင်းရသလိုခံစားမှု။